Global Voices teny Malagasy » Nahoana No Tsy Mahita Fanavakavaham-bolonkoditra Ao Anatin’ilay Dokambarotry Ny Savony Fanasàna Lamba An’ny Qiaobi Ny Shinoa Sasany. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Jona 2016 5:24 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika (fr) i Suzanne Lehn, avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Azia Atsinanana, Shina, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Tantara
Nanao fialantsiny haingana sy nanaisotra ilay dokambarotra ny Qiaobi, mpamokatra ilay savony fanasàna lamba, saingy ny fanambaràna nataony dia niampanga ireo kiana avy any ivelany ho diso nisafoaka loatra tamin'ny fanehoankevitra. Fiarovantena notohanan'ny maro tamin'ireo Shinoa mpampiasa aterineto, izay nilaza fa fahasamihafàna ara-kolontsaina  fa tsy fanavakavaham-bolonkoditra no nasehon'ilay dokambarotra, ary nilaza fa tsy ho vitan'ireo Shinoa ny ho mpanavakavaka manoloana ireo mainty hoditra.
Mba hanakanana ireo kiana miiba ataon'ny gazety tsy ho lasa olana ara-diplaomatika, notsipihan'ny  mpitondra tenin'ny Ministeran'ny Raharaham-Bahiny, Hua Chunying, fa tranga maningana fotsiny ilay dokambarotra, ary “mpirahalahy amin'ireo firenena afrikàna” ny Shinoa.
Raha ndeha holazaina fa tranga maningana ilay dokambarora, tsy marina kosa ny fandàvana ny fanavakavahana misy ao Shina atao an'ireo mainty hoditra, ary ny fandàvan'ireo Shinoa “hanam-pifandraisana toy ny mpirahalahy” amin'izy ireny, hoy  ireo roa mpianatra momba ny fandinihana ny olombelona ao amin'ny The Initium, sehatra natao ho an'ny asa fanaovana gazety arahana fandalinana.
Ny antoko kaominista shinoa, rehefa nandray ny fifehezana an'i Shina tamin'ny 1949, dia niezaka mihitsy ny hiaraka/hitambatra amin'ireo “rahalahiny afrikàna voageja” hanohitra ny imperialisma tandrefana. Nahazatra ireo shinoa tomponandraikitra ihany koa ny fampiasàna ny teny hoe “rahalahy” mba ho entiny mamaritra ilay drafitra “Làlam-baovaon'ny Lamba Landy ” amin'izao fotoana natao hampiroboroboana ny varotry ny shinoa mitodika mankany Eurasie sy Afrika Atsinanana.
Naorina teo ambonin'ny resaka foko ny nasionalisma shinoa. Ao anatin'ny andiany novokariny, ny sariitatra ety anaty aterineto Year Hare Affair  dia mampiseho Afrikàna roa amin'ny endrika hipopotàma — biby kamo sy adala. Notsotsorina ho toy ny fanavotana farany ihany koa ny fanampian'i Shina an'i Afrika satria “nandà tsy hiaraka hilalao amintsika ny tontolo voalohany”. Ny firaisana ara-nofo sy ny fananahana no ivon'ny toepo mankahala ny mainty. Ao amin'ny sehatra fifampiresahana ao amin'ny Baidu, any amin'ny WeChat ary ilay dokambarotra izay resahantsika androany, lokoina ho toy ny fako ireo mainty hoditra, izay mikasa fotsiny ny hiara-mandry amin'ireo vehivavy shinoa. Ireo vehivavy misipa aminà mainty hoditra indray dia lazaina fa mpankafy “zavatra maherihery” na “mahantra sy tsy nandia fianarana”.
Ny kolontsaina shinoa malaza hatramin'ny 1980 koa dia nanamafy ny “lafy maha-mavo”  ny shinoa, mifangarika amin'ireo zavabitan'ny fivoarana siantifika sy ny vaninandro maoderina. Ao anatin'ilay lahatsary shinoa fanadihadiana “River Elegy ” [Hiram-pisaonan'ny Ony], ohatra, natao hanehoana ny sivilizasiona shinoa mitoboka sy mikatona ny Ony Mavo, raha ny loko mangan'ny ranomasina kosa anehoany ny fiarahamonina tandrefana “demaokratika sy mivelatra”, hoy ireto mpanoratra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/16/83634/
 fahasamihafàna ara-kolontsaina: http://www.weibo.com/5603237555/DxsnC6pKI?refer_flag=1001030106_&type=comment#_rnd1464664011644
 Làlam-baovaon'ny Lamba Landy: https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_route_de_la_soie
 “lafy maha-mavo”: https://en.wikipedia.org/wiki/River_Elegy